Factory Jar Factory - Shiinaha Glass Jar Soosaarayaasha, shirkado cusub
Shumaca muraayadaha midabka midabka midabka leh
Qalabka wax soo saarka: muraayad, qaro weyn oo adag.
Midabka badeecada; casaan, kuul, kaliya ku nadiifi maro qoyan oo nadiif ah ama ku dar qadar yar oo ah saabuunta dharka lagu dhaqo si looga fogaado iftiinka qoraxda ee muddada-dheer.
Meeleynta badeecada: qolka fadhiga, qolka jiifka, daraasada, oo la dhigo geeska geeska waa alaab guri oo qurxoon, abuurista jawi guri jaceyl.
Naqshadeynta alaabta: xardhadu waa jilicsan tahay, salku waa qaro weyn yahay oo waa xasilloon yahay, laambaduna ma aha oo kaliya qurxin laakiin sidoo kale waa qaab nololeed.
1000ml taangiga kaydinta muraayadda hufan
♦ Agabyada - Maaddooyinka muraayadda bilaa rasaasta ah, oo nadiif ah oo hufan, caafimaad qaba oo bey'adda u roon, ayaa u badbaadin kara boos badan jikadaada iyo kabadhkaaga, sidaasna ku gaaraysa habeynta jikada mid ka wanaagsan;
Ha ahaato mid cusub oo aan biyuhu ka soo bixin - Naqshadeynta daboolka birta ah ee birta ah waxay kor u qaadeysaa saameynta qufulka ee cuntada si ay cuntada uga dhigto mid cusub oo aan biyuhu lahayn;
♦ Wejiyo badan - Weelka keydka cuntada ee jikada ayaa ku habboon in lagu keydiyo waxyaabo kala duwan, oo ay ka mid yihiin nacnac, lowska, xawaashka, boorashka, badarka, buskudka, shaaha, budada caanaha, baastada, digirta kafeega, iwm.
Isticmaal munaasabadaha - Waxaa loo isticmaali karaa dukaamada ku habboon, kafateeriyada, jikooyinka guriga, iwm, si ballaaran ayaa loo isticmaalaa;
Ubaxa Lotus wuxuu u taagan yahay nabad, daahirnimo iyo iftiin.
Crystal Lotus Flowers waa hagayaasha tamarta wanaagsan.
Dhig barafkan agtiisa daaqad gurigaaga ah si aad u qabato iftiinka qorraxda ee tooska uga ifaya derbi kasta. Madaradani waxay jebin doontaa iftiinka qoraxda waxayna ku abuuri doontaa Qurxinta gurigaaga qurux badan
Ku Wanaagsan Xilli kasta ama Baahiyaha Qurxinta, Aad Loogu Adeegsado Qolka Jiifka, Guriga, Hadiyad ahaan, Baarar, Maqaaxiyo, Makhaayadaha, Arooska, Xafladda iyo Meelo Kale Oo Jaceyl Ah.
7 Midabbada Crystal Glass Lotus Ubaxa Shumaca Shaaha Nalalka Buddhist Shumaca